Ikhamera ye-Multi-Sensor Panoramic iletha izinzuzo eziningi zokubhekwa
Amakhamera we-Multi-Sensor aletha izinzuzo eziningana. Okuphawuleka kakhulu yikhono layo lokususa amakhamera athile ahleliwe futhi kuncishiswe ukubalwa kwekhamera, kunikeze abasebenzisi A ...
Amakhamera we-Multi-Sensor aletha izinzuzo eziningana. Okuphawuleka kakhulu yikhono layo lokususa amakhamera athile ahleliwe futhi kuncishiswe ukubalwa kwekhamera, kunikeze abasebenzisi ukubuka kwephambuni okungenamthungo kwesehlakalo.
Ukubala kwekhamera okwehlisiwe
Amakhamera we-Multi-Sensor Panoramic Camera entendekile ukubuka izindawo; Ngakho-ke, ukufaka esikhundleni sokufaka amakhamera ambalwa enzwa ama-sensor) kufakwa izinzwa ezimbili namalensi ezindlini munye kungenza ukuthi iyunithi yekhamera ingenza indawo efinyelela ku-180 degrees. Ngakolunye uhlangothi, amakhamera ahleliwe anikeza inkambu emincane yokubuka njengoba imvamisa ikhawulelwe ku-angle engu-90-degree okungenani.
Inani elincane lamakhamera, izinzuzo eziningi
Njengoba ikhamera inekheli elilodwa le-IP ne-MAC, izodinga kuphela ilayisense elilodwa le-VMS, lehlise kakhulu izindleko uma ziqhathaniswa namakhamera athile ahleliwe ahlanganisa indawo efanayo. Ngaphandle kwalokho, kunokufakwa okuncane, amamodeli wekhamera we-multing amaningi e-CCTV asebenza nge-poe, avumele ikhebula elifanayo lokuxhumeka kwenethiwekhi abuye asetshenziselwe amandla okuqeda amandla ahlukile.
Ukuqwashisa ngesimo okungcono
Inkambu ebanzi yokubuka panoramic IP amakhamera inika opharetha ukuqwashisa ngesimo okungcono. Amakhamera we-Multi-Sensor angahlangana futhi ahlanganise izithombe ezivela ezinzwa ezahlukahlukene, okwenza abasebenzisi bakwazi ukwazi ngesimo sesehlakalo futhi banikeze amandla okusondeza ngemininingwane ethile.
Ukuqapha kwangempela nokuqopha
Izinzuzo ezinhle kakhulu zamakhamera we-360 Panoramic amanga yikhono lokuvumela abasebenzisi ukuhlanganisa ukuqapha okuphathelene nesikhathi sangempela njengekhamera ye-PTZ nokuqopha. Ngenxa yohlelo lwe-VMS, abasebenzisi bangasondeza kwelinye ingxenye yesimo sokubukeka okusondele, kanti abanye izinzwa beqhubeka nokubheka konke okunye.
PHAMBI Izinselelo amakhamera we-panor an Sensor adinga ukubhekana nazo
I-Huntington Beach New Surveillance System OLANDELAYO